Saturday September 23, 2017 - 09:08:01 in Wararka by Super Admin
Mid kamida ciidamada Mareykanka ee ka qeyb galay duullaanadii gardarrada ahaa ee lagu qaaday wadamada Ciraaq iyo Afghanistan ayaa jawaab dhab ka hadal ah siiyay Mid Kamida wadaada xumayaasha dowladda Sacuudiga.
Mike Breisner oo ah Askari ka qeyb galay duullaankii Ciraaq ayaa sheegay in dowladdiisu ay xasuuq bahalnimo ah ka geysatay wadanka Ciraaq, isagoo boqolaal qof kula hadlayay gudaha Mareykanka ayuu ku dheeraaday in uu runta u sheegay shacabkiisa.
"Ciidamadii aan ka mid ahaa waxay Ciraaq ka geysteen Xasuuq, dad kabadan 2 milyan oo qof shacab ah ayaan dilnay hanti badana waa burburinay sidaas daraadeed Mareykanku ma ahan dowlad Nabad gelyo ee waa dowlad dad rayid ah Xasuuqday” sidaas waxaa yiri Mike Breisner.
isagoo ah kaafir ayuu diiday in wax walba oo xun uu ku raaco dowladdiisa wuxuuna soo bandhigay xaqaa’iq ku saabsan dagaalka Mareykanka uu uga jiro caalamka islaamka sida Afghanistan iyo Ciraaq oo uu ku tilmaamay Gummaad magac wanaagsan loo bixiyay, halka wadaada xumayaasha xukuumadda Sacuudiga ay baadilka ku taageerayaan dowladooda.
Mike Breisner wuxuu ka run badanyahay Sheekh C/Raxmaan Alsudeysi oo ah Imaamka Xaramka islamarkaana ay isku dhowyihiin Boqor Salmaan kaas oo maalmo ka hor sheegay in Mareykanka iyo Sacuudiga ay Caalamka ku Hoggaminayaan ammaan iyo Cadaalad.
Baraha Bulshadu ku kulanto ayaa lagu faafiyay isbarbar dhig ku saabsan hadallada Al-usdeysi iyo Askariga Mareykanka ah ee ku saabsan waxa uu Mareykanku yahay.
Hoos Ka Daawo Jawaabta uu bixiyay Askariga Americanka ah.
Nuxurka Ammaantii Sudeysi uu Ujeediyay dowladda Mareykanka iyo Sacuudiga.
Hoos Ka Daawo Hadaaqa Wadaad Xume C/Raxmaan Sudeysi.